🥇 I-VPN Evikelekile Nethembekile: Ama-VPN aphezulu ayi-10 ka-2022
Njalo lapho zikhona abasebenzisi abaningi abakhathazekile ngokuvikeleka kwabo (ngakho-ke banentshisekelo ku-VPN) ngenxa yokwanda kwezinsongo ze-inthanethi kanye namacala obunhloli obukhulu asephenduke ukusakazwa kwabezindaba. Ngisho nangokwengeziwe ngezikhathi zobhubhane, lapho i-SARS-CoV-2 iphoqa abaningi ukuthi baxhumane ngocingo, okusho ukuphatha idatha yenkampani ebucayi noma yangasese evela kumanethiwekhi asekhaya okungenzeka angabi nazo izindlela zokuvikela ibhizinisi.
I-VPN ayikwazi ukukunikeza kuphela isendlalelo esengeziwe sokuvikeleka kwehhovisi lakho noma ukuxhumana kwasekhaya, ingakusiza nangezinye izindlela. Isibonelo, ungashintsha imvelaphi ye-IP yakho ngendlela ofisa ngayo, ukwazi ukukhetha izwe lendabuko ongalenza finyelela kumasevisi akhawulelwe noma akhawulelwe ezweni lakini. Okuthile futhi okuheha abasebenzisi abaningi, ikakhulukazi izinsiza zokuqukethwe kokusakaza, ku-VPN.
Ama-VPN ayi-10 aphezulu
Phakathi kwe izinsiza ezihamba phambili ze-vpn Sincoma lokhu Top10:
Ama-IP avela emazweni angama-59
6 imishini kanyekanye
Hlanganyela ngamaphromoshini ayo
Ama-IP avela emazweni angama-90
7 imishini kanyekanye
Ama-IP avela emazweni angama-61
Igqamile ngentengo yayo
Ama-IP avela emazweni angama-94
5 imishini kanyekanye
Igqama ngekhwalithi yayo yesevisi
Ama-IP avela emazweni angama-80
Iphawuleka ngesivinini sayo
Ama-IP avela emazweni angama-22
Ivelele ngesevisi yayo yobuchwepheshe
Fihla Imbongolo Yami!
Ama-IP avela emazweni angama-190
10 imishini kanyekanye
Kuhle kakhulu ku-P2P ne-Torrent
Ama-IP avela emazweni angama-46
Ilungele ukusetshenziswa neNetflix
Ama-IP avela emazweni angama-56
Inketho enhle yemindeni
Konke odinga ukukwazi mayelana ne-VPN
Ngaphambi kokuqasha i-VPN udinga ukwazi uchungechunge lwemininingwane ukuze ukwazi ukukhetha leyo evumelana kangcono nezidingo zakho futhi nokunquma ukuthi uyayidinga ngempela isevisi ye-VPN noma cha.
Una I-VPN (Inethiwekhi Yobumfihlo Ye-Virtual), noma inethiwekhi yangasese ebonakalayo, empeleni iyisevisi ekuvumela ukuthi uxhume kunethiwekhi njenge-inthanethi ngendlela evikelekile. Ukwenza lokhu, kusetshenziswa i-obfuscation yomsuka wethrafikhi yenethiwekhi, kunikeza i-IP ehlukile kuneyokuqala enikezwe umhlinzeki wakho wesevisi ye-inthanethi (ISP).
Futhi, i-VPN izokhiqiza "umhubhe” ukuxhumana nethrafikhi ebethelwe, okungukuthi, yonke imininingwane yedatha engenayo nephumayo izovikelwa i-algorithm yokubethela ukuze izinkampani zangaphandle zingakwazi ukuzibamba ngombhalo ongenalutho ngokuhlaselwa kusetshenziswa izinufi (iziduphunga zephakethe lenethiwekhi) njengokuhlasela kohlobo lwe-MitM (Indoda Ephakathi), kanye izohlala ifihliwe kumasevisi athile nabahlinzeki abangathwebula ithrafikhi yakho futhi bayigcine.
Konke lokhu okungenhla kuneminye "imiphumela emibi" eyengeziwe. Isibonelo, ngokushintsha i-IP, izokuvumela futhi finyelela okuqukethwe okukhawulelwe noma okukhawulelwe endaweni yangakini. Isibonelo, ngokuqinisekile uke wazama ukubuka isiteshi sokusakaza-bukhoma esivela kwelinye izwe futhi sikukhombisa umlayezo okwazisa ukuthi le sevisi itholakala kuphela kubasebenzisi abavela kulelo zwe. Yebo, lolu hlobo lokuvinjelwa lungagwenywa nge-VPN…
mahhala vs ikhokhwe
Kukhona ezinye izinsiza zamahhala ze-VPN, nezinye ezikhokhelwayo ezinikezela ngamasevisi amahhala alinganiselwe. Uma ucabanga ukusebenzisa i-VPN, yingoba udinga ukuvikeleka okuphezulu noma ukufinyelela kumasevisi athile akhawulelwe endaweni yangakini. Futhi leyo akuyona into okufanele uyiphathise ezinsizeni zamahhala.
Esinye sezizathu ukuthi izinsiza zamahhala zivame ukuba nezinga eliphansi lokuvikela kodwa, ngaphezu kwakho konke, ngoba zinakho ukulinganiselwa kwethrafikhi nsuku zonke, masonto onke noma nyanga zonke. Lokhu kuzokuvimbela ukuthi ukwazi ukusebenzisa kakhulu ezimahhala futhi lokho kungenzeki ekusakazeni amavidiyo asebenzisa idatha eningi (ikakhulukazi uma kuyi-HD noma i-4K). Futhi okubi nakakhulu, izinsizakalo ze-VPN zamahhala azikuvumeli ukuthi usebenze nezinsizakalo zokusakaza ezimweni eziningi.
Ngakho-ke, uma ufinyelela enye yezinsizakalo zamahhala ze-VPN uzogcina ukhungathekile futhi ugcine ususenkonzweni ekhokhelwayo ngokungakutholi lokho obukufuna ngempela. Ngaphezu kwalokho, izinsizakalo ezikhokhelwayo akudingeki ukuba zibize, kude nakho, kukhona okunikezwayo okunomsoco ukuthi ama-euro ambalwa ngenyanga azokuvumela ukuthi ube nezinsizakalo ze-premium.
Futhi khumbula abakushoyo, lapho okuthile kumahhala, umkhiqizo nguwe. Okusho ukuthi, amanye amasevisi amahhala azokwengamela umsebenzi wakho futhi angawasebenzisa ukuze adayisele izinkampani zangaphandle, abonise izikhangiso ngokuya ngokuncamelayo, noma athole imbuyiselo ethile yezomnotho ngayo. Ngakho-ke, banikela ngenkonzo yamahhala, kepha benza inzuzo ngakolunye uhlangothi…
Amanye amasevisi angase ngisho thengisa umkhawulokudonsa kwamanye amakhasimende esevisi yakho yokukhokha. Okusho ukuthi, basebenzisa ingxenye yezinsiza zakho ukuze bazidlulisele kubasebenzisi abane-akhawunti ye-premium.
I-VPN yomuntu wesithathu noma eyakho?
Kuyiqiniso ukuthi ungakwazi dala eyakho i-VPN usebenzisa iseva ene-GNU/Linux ne-OpenVPN (noma ezinye izinhlelo zokusebenza nesofthiwe efanayo). Kodwa lolu hlobo lwe-VPN luzokhawulelwa kancane ngokuya ngesivinini ngomkhawulokudonsa wakho wenethiwekhi futhi kuzodingeka wenze ukuqina nokuphatha ngokwakho, futhi lokho kuhlanganisa nokubhekana nezinkinga zobuchwepheshe ezingase zivele kuseva.
Lokhu akuyona inketho yeningi labasebenzisi, hhayi nakubasebenzisi abaningi abangochwepheshe. Ngakho-ke, ukhululekile kakhulu yenza isivumelwano nesevisi ye-VPN yomuntu wesithathu futhi ujabulele ukunethezeka ekunikezayo. Kulokhu, kuzodingeka ukhathazeke kuphela ngokufaka iklayenti futhi uqale ukujabulela isevisi kusukela ngosuku lokuqala.
Ingabe inketho enhle yokuthenga irutha ye-VPN?
Kuyiqiniso ukuthi kukhona futhi amanye ama-routers, noma ama-routers, lokho banikeza i-VPN esivele ifakiwe. Amarutha eprimiyamu avame ukubiza ngaphezulu kancane kwesilinganiso, kodwa anikela ngochungechunge lwezinzuzo ezithokozisayo kanye nezinsizakalo ezengeziwe. Isibonelo, ungathola izibonelo ezifana nalezi:
I-TP-LINK Gigabit Multi-WAN...
I-Linksys WRT 3200 ACM
I-Linksys WRT32X Ukugembula
I-Netgear Nighthawk X4S
Nakuba kuyindlela enhle kwezinye izimo, Kufanele uqaphele ngamamodeli werutha we-VPN ashibhile. Ezinye zazo zibonisa ukuthi zinalolu hlobo lwenkonzo kodwa zibhekisela kuklayenti kuphela, futhi azinayo isevisi ehlinzekwa yiseva. Ngakho-ke, kuzodingeka futhi uqashe isevisi yomuntu wesithathu ukuze isebenze.
Ukuze ungabi nazo izinkinga, senze inhlanganisela yama-VPN angcono kakhulu ongakwazi ukuwafinyelela ngokucindezela inkinobho elandelayo:
Bona ama-VPN Routers
Qaphela lokhu! Abaningi bathenga eyodwa yalawa ma-routers futhi banokuthula kwengqondo, kodwa idatha yabo namanje ayivikelekile.
Izinzuzo zokusebenzisa i-VPN
Njenganoma yimuphi omunye umkhiqizo kanye nensizakalo, i-VPN inobuhle nebubi bayo. Kodwa ngokuqinisekile izinzuzo zinamandla kakhulu ukukukholisa ukuthi umqashe:
Ukubethelwa kwethrafikhi yenethiwekhi ukuze idatha yakho ingadluliswa ngombhalo ongenalutho futhi kuhlonishwe ukugcinwa kuyimfihlo (ulwazi oludluliswa phakathi komthumeli nomamukeli alukwazi ukufinyelelwa abantu besithathu ngaphandle kwemvume). Futhi lokho kufaka phakathi yonke ithrafikhi isiyonke, futhi hhayi njengamaseva elibamba ongayilungiselela isiphequluli sewebhu noma izinhlelo zokusebenza ezithile. Kulesi simo, yonke ithrafikhi evela kumadivayisi wakho izovikelwa.
Ubumfihlo obukhulu nokungaziwa. Hhayi nje ukubethela, kodwa futhi nokufihla umsuka we-IP.
Imikhawulo ye-Bypass yendawo yangakini usebenzisa i-IP evela kwamanye amazwe lapho leyo sevisi isebenza ngaphandle kwemikhawulo.
Umhlinzeki wakho we-inthanethi noma i-ISP (Telefónica, Orange, Eurona, Jazztel, Vodafone,…) ngeke ukwazi ukwazi ukusebenzisa okwenzayo kokuxhumana kwakho. Ngaphandle kwe-VPN izokwazi ukwazi amakhasi owavakashelayo, uma ulanda okuqukethwe okuphikisiwe, njll. Lokhu kunjalo njengoba yonke ithrafikhi izodlula kumaseva abo futhi irekhodi lakho lizohlala. Ngaphezu kwalokho, umthetho udinga i-ISP ukuthi igcine idatha enjalo iminyaka eminingana. Yonke le datha ingathengiswa noma idluliselwe ezinkampanini zokukhangisa, izikhungo zikahulumeni, njll.
ubuqotho bedatha, ukuze uma befika lapho beya khona kube yilabo abasuka lapho besuka khona. Okusho ukuthi, azishintshiwe endleleni.
I-VPN ilula kakhulu, futhi ngezinye izikhathi ihilela ukucindezela inkinobho ukuyiqala noma ukuyimisa. Esikhundleni salokho, ezinye izinsiza ezinjengamaseva elibamba, nezinye izindlela zokuphepha ezihlukile, zingasho ubunkimbinkimbi.
Ilondoloza. Nakuba inenani, iphansi kakhulu kunaleyo yamanye amasevisi noma izinkokhelo eziya kochwepheshe bezokuphepha abangavikela inethiwekhi.
Impela i-VPN ayinayo amaphuzu amabi ephawuleka kakhulu. Amaphuzu amabili kuphela angagqanyiswa aphikisana nayo:
Intengo: Yize zikhona zamahhala kodwa sengike ngaphawula ukuthi azifanele kakhulu. Ngakho-ke, ukuze ube ne-VPN enhle udinga ukukhokha. Nokho, awawona amanani aphezulu futhi avunyelwe kubantu abaningi. Ngerutha ene-VPN ungakwazi futhi ukugwema lezi zinkokhelo...
Ijubane lokuxhuma: Ngokusobala, lapho ubhala ngemfihlo idatha, kufanele ibethelwe futhi ibhalwe phansi ukuze ukwazi ukuyibona njengokungathi awunayo i-VPN. Okusho ukuthi, noma ngabe kubonakala kuwe, kodwa lokho kuphakamisa umthwalo owengeziwe ozonciphisa isivinini. Uma une-ADSL esheshayo, i-fiber optic, noma ulayini we-4G/5G, ngeke kube yinkinga kakhulu. Kungase kube yingozi kakhulu ekuxhumekeni okunensayo kuphela (noma uma unohlobo oluthile lomkhawulo wedatha futhi kukwehlisela ijubane kuze kuphele inyanga).
Kungani ngidinga i-VPN?
Kufanele uhlole ukuthi ukuba ne-VPN kwenza noma yimuphi umqondo esimweni sakho esithile. Empeleni, ngenxa yezizathu zobumfihlo nezokuphepha kuphela, kuyafaneleka. Eqinisweni, ubumfihlo bulungelo kunethiwekhi eliphulwa nsuku zonke yizinkampani ezinkulu. Nge-VPN ungabeka isixazululo kulokhu. Kodwa kungakhathaliseki lokhu, zikhona nezinye izizathu zokuthi kungani uzodinga i-VPN:
I-SARS-CoV-2: Ubhubhane seluguqule umphakathi futhi seluguqule nendlela yokwenza ngezindlela eziningi, nasemsebenzini. Manje kunezinkampani eziningi ezengeziwe kanye nama-freelancers asebenza ngocingo. Lokhu kuhilela ukusebenzisa amadivaysi akho ukuze uxhume (bona i-BYOD) kanye nenethiwekhi yakho yasekhaya. Izinkampani eziningi zisingatha idatha yekhasimende ebucayi (idatha yentela, izithombe eziyimfihlo, ulwazi oluvikelwe impahla yobuhlakani, idatha yezokwelapha,…) futhi ngaphandle kwe-VPN zizoba sengcupheni yokuputshuzwa noma ukutholwa abantu bangaphandle abangagunyaziwe.
Vikela idatha yakho yokuphequlula: Nge-VPN unesendlalelo esengeziwe sokuvikela njengoba ngishilo ephuzwini eledlule. Lokhu kubaluleke kakhulu uma usebenzisa ukuxhumana kwe-WiFi okusesidlangalaleni noma okungavikelekile ukuze ufinyelele kumasevisi athile asebhange, njll., ngaphandle kokuthi abanye bakwazi ukuvimba amaphasiwedi nolunye uhlobo lwemininingwane noma idatha efakiwe.
I-Bypass internet censorship: Uma uhlangabezana nesevisi noma uhlelo lokusebenza olungatholakali endaweni yangakini, ene-VPN ungafinyelela kuyo ngokuthola i-IP evela kwelinye izwe. Lokhu kungase kusebenze kakhulu ukubuka ezinye iziteshi eziku-inthanethi, finyelela okuqukethwe okungatholakali kwezinye izinkundla zokusakaza (i-AppleTV, i-Netflix, i-Disney+, i-F1 TV Pro,...), ngisho nakwezinye izinhlelo zokusebenza ezikhawulelwe ku-Google Play, Isitolo Sohlelo Lokusebenza, njll. njll.
I-P2P kanye ne-Torrent Downloads: ukulanda okuqukethwe ngamanethiwekhi e-Torrent noma e-P2P, phakathi kwamanye amawebhusayithi ukulanda okuqukethwe okuphikisiwe noma okungekho emthethweni, ungathembela ku-VPN ukuthi ikwenze ngendlela engaziwa kakhulu nokuthi i-ISP ayikwazi ukuqaphela lo msebenzi. Yize lokhu kungekho emthethweni futhi uzokwenza ngokuzifaka engozini...
Njengoba ubona, izinhlelo zokusebenza ze-VPN ziyahamba ngale kokuvikeleka okulula...
Yini okufanele ngiyazi ukuze ngikhethe i-VPN engcono kakhulu?
Kuqinisekile imininingwane yobuchwepheshe okufanele uhlale uyibhekile ikakhulukazi uma uqhathanisa ezinye izinsizakalo ze-VPN phakathi kwakho nokungabaza. Zingaba inkomba enhle yokunquma ikhwalithi yesevisi futhi uma ivumelana kangcono nezidingo zakho.
Inombolo yamaseva ne-IP
NordVPN AES-256 Ngokushesha Kusuka emazweni we-59 6 kanyekanye Amaphromoshini
CyberGhost AES-256 Ngokushesha Kusuka emazweni we-90 7 kanyekanye Ukuphepha
Surfshark AES-256 Ngokushesha Kusuka emazweni we-61 Akunamkhawulo Intengo
ExpressVPN AES-256 Kuhle Kusuka emazweni we-94 5 kanyekanye Ikhwalithi yensiza
I-Zenmate AES-256 Kuhle Kusuka emazweni we-74 Akunamkhawulo
Hotspot Shield AES-256 Ngokushesha Kusuka emazweni we-80 Amadivayisi we-5 Isivinini
TunnelBear AES-256 Kuhle Kusuka emazweni we-22 Amadivayisi we-5 Inkonzo yezobuchwepheshe
Fihla Imbongolo Yami! AES-256 Ngokushesha Kusuka emazweni we-190 10 kanyekanye Ilungele kakhulu ukulanda kwe-P2P ne-Torrent
ProtonVPN AES-256 Kuhle Kusuka emazweni we-46 10 kanyekanye Ilungele ukusetshenziswa neNetflix
I-PrivateVPN AES-256 Kuhle Kusuka emazweni we-56 6 kanyekanye Inketho enhle yemindeni
Ezinye izinsiza ze-VPN zinenani elikhulu lamaseva asakazwa emazweni amaningana, okuzoba inzuzo ecacile. Ngaphezu kwalokho, abanye bakunikeza a IP ehlukile okungahleliwe, kodwa ezinye izinsiza ziya phambili futhi zikuvumela ukuthi ukhethe umsuka we-IP eshiwo.
Lokhu kuyathakazelisa kakhulu kwabakwa amasevisi akhawulelwe noma okuqukethwe. Isibonelo, cabanga ukuthi ufuna ukufinyelela isevisi etholakala eSweden kuphela. Ngeyodwa yalawa ma-VPN ungathola i-IP yaseSweden futhi ngaleyo ndlela ufinyelele sengathi ungomunye waseSweden...
Ingenye yedatha ebaluleke kakhulu ukuphepha kusuka enkonzweni. Kungase futhi kube nomthelela ekusebenzeni. Ngokusobala, lapho uvikelekile kakhulu uzolahlekelwa isivinini, nakuba ezinye izinsizakalo ze-VPN zekhwalithi ziye zaphatha ngobuchwepheshe obuthile ukuze lokhu kungenzeki futhi zinganikeza isivinini esihle kakhulu nokuphepha.
Noma nini lapho ukhetha i-VPN, kufanele ukhethe ene-algorithm eqinile yokubethela engenakho ubungozi obaziwayo. Enye yalezo I-algorithms yi-AES-256okuyisinqumo esihle kakhulu. Eqinisweni, izinsizakalo eziningi zokukhokha zikhetha ukuvikelwa kwezinga lezempi, okuphakathi kweziningi ezitholakalayo.
Ngokungeziwe ekubetheleni, ezinye izinsiza zokukhokha zinobuchwepheshe bokuvikela obungeziwe noma izinyathelo zamakhasimende azo. Kodwa noma kungaba njalo, gwema ama-algorithms angavikelekile afana ne-SHA-1, MD4, ne-MD5 ephuliwe.
Futhi khumbula, alukho uhlelo oluvikelekile lwe-100%. Into eyingozi kakhulu ukukholelwa ukuthi awunabungozi. Eqinisweni, abanye ama-cybercriminals Bakwazile ukwephula lokhu kuxhumana ngokusizakala kohlobo oluthile lokuba sengozini noma ezinye izindlela zokukhwabanisa ezinjengokwebiwa kwephasiwedi.
Ngenye yedatha ebaluleke kakhulu uma ungafuni i-VPN ikucindezele isivinini senethiwekhi ngendlela enkulu. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi kufanele ukhethe izinsizakalo ngesivinini esihle. Izinsizakalo eziningi zamanje zinikeza izinsizakalo ngesivinini esiphezulu, ngakho-ke ngeke kube yinkinga kakhulu, ikakhulukazi uma usebenzisa uxhumano olusheshayo (ADSL, fiber optics,...).
Angibhekiseli kunethiwekhi ngokwayo, kodwa kudatha umhlinzeki wesevisi ye-VPN ngokwayo angayigcina. Njengoba ngishilo ngaphambili, idatha ngeke idlule kumaseva e-ISP, kodwa izodlula kulawa Umhlinzeki we-VPN.
Abanye babahlinzeki gcina idatha yelogi njengegama lakho, imininingwane yokukhokha, i-IP yakho yangempela, njll. Idatha engasiza ukukuhlonza. Lokho kuyanconywa, ngakho-ke kufanele ufunde ukuphrinta okuhle kokuthi laba bahlinzeki bayayigcina yini le datha noma cha. Qaphela labo abawagcinayo futhi njalo ukhethe abagcina amarekhodi amancane.
Ezinye izinsiza zamahhala ze-VPN azikho isevisi yezobuchwepheshe noma yekhasimende noma impofu impela. Endabeni yezinsizakalo zokukhokha, lokhu kuvame ukuba ngcono ngandlela-thile futhi 24/7 (amahora angu-24 nezinsuku ezingu-7 ngeviki), kodwa akufani kuzo zonke izimo.
Ezinye izinkonzo zinikeza ukunaka kuphela ngesiNgisi, abanye bazophinde babe nayo ngeSpanishi. Ngokuvamile kokubili ngocingo nange-imeyili, futhi abanye baze babe nengxoxo ebukhoma ukuze baphendule imibuzo yakho noma baxazulule izinkinga ezingase ziphakame.
Ukusekela noma izinkundla
Izinsizakalo ze-VPN zamahhala zinokusekelwa okuncane, kepha iningi labakhokhelwayo linokwesekwa okukhulu ngokuya ngamapulatifomu asekelwayo. Lezi zinsizakalo zinezinhlelo zamaklayenti ezingafakwa kumasistimu wokusebenza ahlukahlukene njenge Windows, macOS, Linux, Android, iOS, njll. Abanye baze bakuvumele ukuthi kwenziwe kuma-smart TV athile nasezipheqululini ngezengezo.
Bheka kahle uhlobo lwezinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo ekhaya noma emsebenzini bese ukhetha njalo umhlinzeki we-VPN ongakunikeza iklayenti elisemthethweni liyasekelwa.
Lawo maklayenti engikhuluma ngawo esigabeni sangaphambilini anesithombe esibonakalayo esingaba ngaphezulu noma ngaphansi enobungane. Ngokuvamile alula futhi awudingi amakhono ekhompyutha ukuze uvule futhi uvale i-VPN noma wenze izilungiselelo ezithile kuyo.
Ngokuvamile kulula njengokusebenzisa iklayenti le-VPN futhi Cindezela inkinobho ukuze isevisi icushwe futhi iqale ukwenza "umlingo" wayo.
Ezinsizeni ze-VPN ezikhokhelwayo ungathola izindlela ezimbalwa zokukhokha ukubhalisa. Lezi zindlela zokukhokha zingaba ezimbalwa:
Ikhadi lesikweletu: Ikhululekile futhi ijwayelekile kubasebenzisi abaningi.
PayPal: Ezinye izinkundla nazo zamukela inkokhelo ngale nkundla evikelekile lapho udinga khona i-imeyili yakho kuphela.
Izitolo zohlelo lokusebenza: Amanye ama-VPN ezinkundla zamaselula avumela inkokhelo ngezinsizakalo zokukhokha zezitolo zezinhlelo zokusebenza zamapulatifomu eselula, njenge-Google Play, Isitolo Sohlelo Lokusebenza, njll.
Ama-cryptocurrensets: ama-cryptocurrencies avumela izinkokhelo ezingaziwa ngokuphelele, njengalezo ezenziwe nge-Bitcoin. Abahlinzeki abaningi be-VPN basekela lolu hlobo lwenkokhelo ye-cryptocurrency.
abanye: Abanye futhi basekela ezinye izindlela ezahlukene.
Mhlawumbe igama alikhali DMCA, kodwa igama elibhekisela emthethweni wokuvikela i-copyright wase-United States. Lo mthetho uvikela zonke izinhlobo zokuqukethwe okunjengamamuvi, umculo, isofthiwe, izincwadi, njll. ngokumelene nobugebengu.
Futhi lokhu kuhlangana ngani ne-VPN? Kahle kahle, abanye abahlinzeki be-VPN banendlunkulu yabo emazweni anemithetho engacabangi ukuphendula izicelo ezivela e-United States lapho kwenziwa umsebenzi othile wokukhwabanisa. Okusho ukuthi bangaphakathi izindawo zokucasha ezisemthethweni ezivikela amakhasimende abo uma idatha iceliwe ukuba yahlulelwe.
Kodwa akuzona zonke izinsizakalo ze-VPN ezisebenza kulolu hlobo lwepharadesi ngaphandle kwale mithetho, ezinye zisendaweni lapho zenza khona Lezo zicelo zizokwamukelwa.. Ngakho-ke uma usebenzisa i-VPN yakho emisebenzini yobugebengu, kufanele ukunake lokhu. Nokho, kule bhulogi asikukhuthazi ukusetshenziswa komgunyathi...
1 Ama-VPN ayi-10 aphezulu
2 I-Nord VPN
2.0.0.1 Hlanganyela ngamaphromoshini ayo
4.0.0.1 Igqamile ngentengo yayo
5.0.0.1 Igqama ngekhwalithi yayo yesevisi
6.0.0.1 Ivelele ngekhwalithi-inani layo
7.0.0.1 Iphawuleka ngesivinini sayo
8.0.0.1 Ivelele ngesevisi yayo yobuchwepheshe
9 Fihla Imbongolo Yami!
9.0.0.1 Kuhle kakhulu ku-P2P ne-Torrent
10.0.0.1 Ilungele ukusetshenziswa neNetflix
11.0.0.1 Inketho enhle yemindeni
12 Konke odinga ukukwazi mayelana ne-VPN
12.1 Yini i-VPN?
12.2 mahhala vs ikhokhwe
13 Ama-VPN ethu esiwathandayo
13.1 I-VPN yomuntu wesithathu noma eyakho?
13.2 Ingabe inketho enhle yokuthenga irutha ye-VPN?
13.3 Izinzuzo zokusebenzisa i-VPN
13.4 Ukungalungi kwe-VPN
13.5 Kungani ngidinga i-VPN?
14 I-Nord VPN
14.0.0.1 Hlanganyela ngamaphromoshini ayo
15 Yini okufanele ngiyazi ukuze ngikhethe i-VPN engcono kakhulu?
15.0.5 Sawubona VPN
15.0.12 Thinta i-VPN
15.1 Inombolo yamaseva ne-IP
15.2 I-algorithm yokubethela
15.4 Ubumfihlo nokungaziwa
15.5 ukusekela kwezobuchwepheshe
15.6 Ukusekela noma izinkundla
15.7 I-GUI enobungane
15.8 Izindlela zokukhokha
15.9 Izicelo ze-DMCA